TALE JENERALIN’NY BIANCO : Tsy handefitra amin’ireo mpanao tantely afa- drakotra ny harem-pirenena
Teto Mahajanga no nandalovan’ny tale jeneralin’ny Bianco Andrianirina Laza Eric voalohany taorian’ny nahavoatendry azy teo amin’ny toerany. 22 août 2019
Efa Niasa tamin’ny bianco teto izy, nitazona ny lefitry ny talen’ny bianco misahana ny fanadihadiana taona maro lasa izay. Nanambara izy fa tsy handefitra amin’ireo manao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ka hampihatra ny lalàna amin’izay minia manao izany. Hatolotra ny fitsarana manokana izy ireo, hoy hatrany izy. Telo ny asan’ny bianco, hoy hatrany izy dia ny fanabeazana sy ny fisorohana ary ny fampiharana ny lalàna. Vao napetraka tamin’ny taona 2014 ny lalàna vaovao mikasika ny kolikoly, hoy izy ary nohavaozina sy nohatsaraina tamin’ny 2016.
Tokony hanara-maso ireny tranga ireny ny mpanao gazety, hoy izy, indrindra ireo efa nahazo fanofanana amin’ny ’journalisme d’investigation’. Izay tsy mbola nahazo izany dia tokony homena mba hazava tsara ny tranga tsirairay ka hahamora ny fanadihadiana, hoy hatrany izy. Tato ho ato dia ny trafikana sokatra no tena malaza eto Boeny. Zana-tsokatra efa an-jatony maro no tratra teto ary efa misy koa ireo tratra tany amin’ny nosy Kaomaoro no naverina teto. Karazana sokatra radiata avy any atsimo izy io fa tsy fantatra ny fomba nahatongavany eto.
Milaza kosa ireo mpiaro ny tontolo iainana fa misy tambajotra mpanao%